Lothar Matthaus; “Bayer Munich way ku qaldanayd inay fasaxdo Kroos waxay ahayd inay mushaarka u kordhiyaan” – Gool FM
Lothar Matthaus; “Bayer Munich way ku qaldanayd inay fasaxdo Kroos waxay ahayd inay mushaarka u kordhiyaan”
(Munich), 20 Okt 2016 –Xidiggii hore ee Jarmalka iyo Bayern Munich Lothar Matthaus ayaa dhaleeceeyay mas’uuliyiinta kooxdiisii hore kaddib go’aankii ay laba xilli ciyaareed ka hor ku iibiyeen Laacibkoodii Khadka dhexe Toni Kroos oo ku biiray Real Madrid.
Kroos ayaa dhowaan saxiixay heshiis dheer oo uu kula sii joogayo kooxda Real Madrid illaa 2022, isagoo loo kordhiyay mushaarka illaa laga dhigay xidigga ugu mushaarka sarreeya dhammaan ciyaartoyda Jarmalka.
“Aniga ahaan Kroos waa khadka dhexe ee haatan ugu fiican, ma arko cid heerkiisa ah, Qaranka Jarmalkana wuxuu ka ahaa sida boqor oo kale, haddii aan dhinaca uu ka liito ka eego keliya waxay ahayd goolasha uu dhalinayay oo yarayd, inta badanna Kubbado badan ayuu laadi jiray, hadda Zidane wuxuu ka ciyaarsiiyaa booskiisa” ayuu Matthaus u sheegay Wargeyska Isboortiga ‘Bild’.
“Bayern Munich si guud uma shaacin in ay inay ku qaldanayd iibintiisii, laakiin waxaan hubaa inay gudahooda garwaaqsadeen, Kroos waxay ahayd inaan loo ogolaan inuu ku biiro Real Madrid 2014, balse Bayern waxay u diideen inay siiyaan mushaar la mid ah sida kan Muller, Lahm iyo Neuer, meeshaas inay iska hagaajiyaan ayay ahayd” ayuu sii raaciyay Matthiaus.
“Weli ma garanayo sababta ay heshiis ula gaari waayeen, hadda Kroos waa furaha Khadka Dhexe ee Madrid, waxa uu haystaa kalsoonida cid walba, Kroos wuu ku saxsanaa inuu dibadda aado, waxay ahayd sida inuu ku guuleystay Baqtiyaanasiib” ayuu ku soo gunaanaday Lother Matthiaus.
Saxaafadda Ingiriiska oo Goolhayaha Manchester City ku tilmaantay 'Musiibo, Nacas iyo mid Eber ah'